Calanka Koonfur Sudan oo la taagey - BBC Somali
9 Luulyo 2011
Image caption Madaxweyne Salva Kiir
Dawladda Sudan ayaa iyana rasmi ahaan ugu dhawaaqday inay aqoonsatay dalkani ee Koonfur Sudan ee hore uga tirsanaan jirey. Damaashaadyo iyo daabaaldegyo weyn ayaa laga oogey meel kasta, lana filayaa inay si socdaan maalmahan, waxana ka qayb gelayaa munaasabaddan wufuud caalami ah iyo madax badan oo ka kala socota dalalka Afrika iyo adduunka kale intaba. Dalka iyo Dadka
Image caption Khariidadda Koonfurta Sudan
Sudan oo ahayd dalka ugu ballaadhan qaaradda Afrika oo ku fadhiday dhul dhan ilaa 2.5 malyuun (sq km) oo KM oo dhinac walba iska le'eg, waxay haatan u kala qaybsantay laba dal. Koonfur Sudan waxay ku fadhidaa ilaa 640,000 oo KM oo dhinac walba iska le'eg, waxayna u dhigantaa qiyaastii rubuc dhulweynihii hore ee Sudan. Waxa dhex mara webiga Nile, waxayna u badan tahay dhul-biyood dhir iyo cagaar leh. Koonfur Sudan waxay xuduud la yeelanaysaa dalalka Sudan, Ethiopia, Kenya, Uganda, DR Congo, iyo Jahuuriyadda frikada Dhexe.
Tiraa dadweynaha Koonfur Sudan waxa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 8 - 10 malyuun oo qof, waxayna u dhigmaysaa ilaa rubuc tiradii hore ee dadweynaha dalka Sudan oo guud ahaan isku ahaa in ka badan 40 malyuun. Dadweynaha Koonfur Sudan waxay ka kooban yihiin in ka badan 200 oo qawmiyadood amma qabaa'il, waxana u badan Dinka iyo Nuer-ka. Waxay ku hadlaan luqado kala duwan. Haatanse Af-Ingiriisiga ayaa noqnaya luqada rasmiga ah, waxanu bedelayaa tii hore ee Carabiga ahayd. Dadweyaha Koonfur Sudan waxay kala haystaan intooda badani caadoyin iyo caqiidooyin kala duwan oo dhaqan dhaqan oo dhawr ah, iyo diinta masiixiga.
Koonfur Sudan waxay sanadkan bilawgiisii u codaysay inay gooni isku taagto ka dib markii laga qaaday afti dadweyne. Arrintani waxay ka danbaysay halgan dheer oo siaasadeed iyo mid dagaal oo qawmyadeed intaba. Sudan waxa soo maamuli jirey quwado hore oo kala geddisan oo ay ku jraan maamuladdii Turkiga iyo Masar, intii aan Ingiriisku qabsan Masar iyo Sudan. Ingriiska oo ka walaacsan Faransiiska iyo inuu dhinaca koonfureed ee webiga Nile oo biyaha soo mara kala dhantaalo, ayaa waxa uu maamulkiisii ku fidiyey ilaa koonfurta Sudan, si aan Masar loogu cunaqabatayn biyaha webiga Nile. Hasse ahaatee inti u dhaxaysay 1946 - 1956, Koonfur Sudan waxay lahayd maamul gooni ah oo Ingiriisku u sameeyey. waxay ka walaacsanaayeen waqooyigu in uu fulin waayo balanqaadyadii gobannimada ee 1956 oo ahaa hab federaal ah iyo cabsi ku saabsan in lagu soo rogo xukunka shareecada islaamka, iyo Carabnnimo.